Volgograd Medical University: neminyango, amandla, ukubuyekezwa
Volgograd Medical University sikhungo endala lwemfundo ephakeme ngaphandle komuzi, yasungulwa ngo-1935 futhi yayibizwa kanjalo ngaleso sikhathi kwaseStalingrad Medical Institute. Nokho, kunzima ngempela ukuyenza VMC, imizamo abafundi namuhla tiyafezeka esikhathini esizayo, lapho uzothola umsebenzi omuhle.
Umlando we nyuvesi (1935-1941 biennium).
Ngesikhathi ekusungulweni inyuvesi kwakukhona ubuhlakani eyodwa kuphela (yezokwelapha) nezihlalo eziyisishiyagalombili. Abafundi bokuqala baqala abantu 172, okuyinto kwakuwunyaka obalulekile ke kwaseStalingrad. labantu kulo muzi zabantu 500,000, babo 800 kuphela ngezinga elithile yezokwelapha futhi anganikeza usizo afanele Bakwethu.
Inhlangano lesikhungo enjalo sasifanele, kungani kwaseStalingrad wathunyelwa nososayensi abaqeqeshiwe. Kancane kancane inani ukuqeqeshwa izindawo ubuchwepheshe liye landa, futhi sebekwazi ukwakha database enkulu emtholampilo. Ngo-1937 abafundi basesikoleni esiphakeme wokuqala waqala ukusebenza esibhedlela zesifunda, futhi ngemva kweminyaka emithathu sikhungo kwamiswa njengenhlangano base ezibalulekile ngeziguli cishe zonke izinkundla ezidingekayo.
Inyuvesi futhi ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe
Ngo-1941, impilo zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa ishintshile kakhulu, kodwa Institute Medical e kwaseStalingrad yaqala ukusebenza kabili nzima kunanini ngaphambili. Kuphela 1941 kwaba ukukhululwa kwe-ezingaphezu kuka-650 ochwepheshe bezokwelapha. In parallel ukuqeqeshwa eyisisekelo nabothishela labatsintsekako ku ukuphinda uqeqesho odokotela abanolwazi ukusebenza ezibhedlela.
Ngo-1942, front line usondele ukuze kwaseStalingrad. Ngenxa yalokho zokuqhunyiswa kwebhomu walesi sikhungo muzi wenziwe ingxenye ubhujiswe, ukubulala othisha eziningana nabafundi. Ngemva Battle of kwaseStalingrad, abafundi kanye okusezingeni eliphezulu othisha esikoleni wathatha ingxenye esebenzayo alulame. Isikhungo sosizo omkhulukazi etholakele nabo kusuka namanye amayunivesithi kanye Yabantu Commissariat, odokotela abavela kulo lonke elaseSoviet Union wafika kwaseStalingrad kuphinde kwakhiwe isikole. Uhlelo esilandelayo ochwepheshe kwenzeka kuphela ngo-1944.
Umlando kwempi nyuvesi
ukusebenza evamile Institute lisungulwe kabusha nga-kuphela ngemva kwempi yezwe yesibili. Ngo-1961-ke iqanjwe kabusha kwaseStalingrad, zabulawa ezehlela sikhungo wezokwelapha. Manje igama edolobheni linjengezwi Volgograd. Volgograd State Medical University - lokhu kube ngamagama amasha we nyuvesi. Ngaphambili, lesi sikole siye uqambe Academy, kodwa isimo zaseyunivesithi zangenza inyuvesi ngokuphelele isikhundla ezahlukene.
Ngawo lowo nyaka inyuvesi wathola ekamelweni elihlukile, esisogwini Square of Fighters Liwile, kungenzeka eyunivesithi ngendlela esifike ngesikhathi ukuze afeze imisebenzi yayo. Namhlanje main isakhiwo bezemfundo (futhi izindlu nabaqashwa nyuvesi) kulendlu. Inani elikhulu ikhono omusha, bakwazi ukwakha izikole ngabanye ngokwesayensi.
Kusukela ngomhla ka-2015 i-Volgograd Medical University, zinabantu sabafundisi abangomakad 'ebona, kuhlanganise academicians namalungu ohambelana Russian Academy of Sciences, ukhetho odokotela wesayensi, osolwazi kanye noprofesa umhlobo. Ngo-2013, le nyuvesi kwaba omunye iyunivesithi 100 engcono ngemva segunya Ministry of Education.
Virtual yephrojekthi izikhungo zayo siqu yezokwelapha
Kaningi abazali abafundi abazoba Ufuna ukufunda mayelana okusezingeni eliphezulu izikole ukubuyekezwa. Volgograd Medical University igcwele kubo, futhi kwi-website ye-sikhungo ungathola ulwazi olufanele. Ngo-2014, i-University umkhankaso portal "VolgGMU Virtual", okuyinto endaweni ekude le emajukujukwini, lapho ungakwazi bayoqeqeshwa elifana yangempela.
Bonke othisha kanye nabafundi, kanye nodokotela ukuhlangabezana e virtual yokufunda inthanethi lapho zifezeke amakhono emikhakheni ehlukahlukene. Kwaba kukhona ukuthi bakwazi ukuxazulula izinkinga, ukuhlela izingqungquthela nemibiko, futhi uthathe izivivinyo. Naphezu iphrojekthi virtual, abafundi bathola ulwazi eliphezulu, nothisha ukusekela njalo imizamo yabo.
Ukuqeqeshwa odokotela kudlala indima enkulu kwezokwelapha zanamuhla, yingakho emtholampilo 1 we Volgograd Medical University, Umtholampilo of Medicine Family futhi Isibhedlela zamazinyo zingezinye ngezizathu esiwusizo ukuthuthukiswa kwamakhono. Kuzo zonke lezi zikhungo odokotela luthela ukunikeza zobuchwepheshe ukunakekelwa ngezokwelashwa iziguli ngaphansi kokuqondisa ngaphezulu nozakwethu abanolwazi.
Volgograd Medical University: neminyango
Kusukela ngomhla ka-2015 kukhona amandla eziyishumi eyunivesithi, lapho odokotela junior ungathola zonke amakhono adingekayo ukuze umsebenzi olwengeziwe. udumo omkhulu ekolishi wezokwelapha VolgGMU, odlala indima seFundo ehlukile. abafundi basekolishi kungaba ukukhokhela ukulondoloza okuncane futhi ngesikhathi esifanayo bathola imfundo esezingeni eliphezulu.
Bezokwelapha, amandla kanye ne-medical zamazinyo uhlangabezana kwakuzothutheleka abafundi unyaka ngamunye ngubani sebetshiya ngenxa yokuntuleka izihlalo. legatsha Pediatric kanye ezithaka imithi, kanye Faculty of Clinical Psychology unyaka ngamunye ukuthola abalaleli bakhe.
Industrial umkhuba kuqokonyiswe iyunithi ahlukene, kufanele kuphawulwe Faculty of Advanced Medical (CCF). Volgograd Medical University umema bonke ochwepheshe samanje ukuthuthukisa ulwazi lwabo esikhathini esifishane futhi ngaphandle kokuphazamiseka kusukela umsebenzi ngokushesha.
Iningi abaqhuba odokotela idolobha ngaphezu kwalokho iziqu HFCs. Volgograd Medical University, uyahamba ukuhlangabezana abafundi ezingaba futhi wakha uhlelo ukuqeqeshwa okusekelwe izifiso zabo. Ngaphakathi khono kukhona 14 izifundo neminyango 10.
I-Faculty inikeza ochwepheshe bezempilo bayoqeqeshwa e 37 zochwepheshe. Osokhemisi Ungase futhi uqeqesho ezengeziwe, kodwa lokhu badinga ukuya Pyatigorsk, ngoba yenziwa khona. Bonke labo ngempumelelo ucedzela Faculty ukuthola ama-diploma isimo.
UMnyango we Volgograd Medical University kwamiswa emashumini amaningi eminyaka, kusukela ngomhla ka-2015-76 Akukhona kuphela mayelana yangaphakathi ukuqeqeshwa izinhlangano elihlobene ne lunye abafundi 'esikoleni esiphakeme futhi ukusebenza jikelele zochwepheshe uMnyango (Physical ezeMfundo kanye nezeMpilo, isiRashiya futhi usikompilo nenhlalo lithathelwe futhi t. d.).
UMnyango ngamunye ibilokhu bahileleke inqubo yemfundo, zezifundo kubafundi isekelwe izici ngamunye wabo. A emihlanganweni ubuhlakani masonto onke ukuze basize abafundi balukhulume lolu hlelo ekhona. abasebenzi umfundi Inxanxathela zingumsebenzi njalo methodical ukufeza ngcono.
Bonke labo abafisa ukuthola imfundo eyenza imithi, ikomidi Ukukhetha ngokuvamile inikeza ukuya egatsheni Pyatigorsk we Volgograd Medical University, ngoba lapho Ochwepheshe baqeqeshiwe kule ndawo. Lesakhiwo ngokwalo ubizwa nangokuthi Pyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute futhi.
Isikhungo kwamiswa ngo-1943 futhi kuze 2012 kwaba esizimele, kodwa ngemva kabusha yaba ingxenye VolgGMU. Njalo ngonyaka egatsheni Pyatigorsk ku esigcwele, engaphezu kwengu-1,300 abafundi babhaliswa nsuku mali, mayelana 750 ekukhokheleni imfundo yabantwana babo. Ngenxa uhlelo exchange kulolu cwaningo Institute of abafundi 60-65 bakwamanye amazwe unyaka ngamunye.
Ngesikhathi uMnyango ukuxhumana ngesimo kuyiwa, nsuku kwesabelomali has abafundi mayelana 750, abangaphezu kuka-1,500 ngokuzimela buyisela ukuqeqeshwa izindleko. In parallel nalokhu ngokuqhubekayo lwenteke izinhlelo ezengeziwe ukuthuthukisa amakhono abasebenzi ekhona.
Volgograd Medical University ngonyaka ivula iminyango yayo kubafundi abasha. Umfakisicelo unelungelo ukuhambisa amaphepha July 5-10, uma uya thatha yokungena izivivinyo esikoleni esiphakeme noma uya okukhethekile ezihlobene Pediatrics, amazinyo futhi ibhizinisi wezokwelapha.
Uma umfundi abazoba akuyona uhlela ukuthatha luhlolo lolwentiwa esikolweni, njengoba nje iye zonke izitifiketi ezidingekayo ukuhlolwa, angase athumele emaphepheni 20-24 July. Udinga ukuhambisa ikhophi yaleli iphasipoti, isitifiketi imfundo yesibili, ulwazi lwezokwelapha ifomu 086-y, kanye izithombe 3x4 cm ibhizinisi lakho siqu.
Uma ofaka isicelo noma yimaphi amalungelo akhethekile ezingaba omuhle kuthinte yokuvuma (abakhubazekile, izitifiketi eyengeziwe kanye diploma, nokunye. D.), Kumelwe futhi unikeze isiqinisekiso lokhu. Kuphela kulesi simo kungenziwa okulindeleke ukuba bahlomule.
Ngo VolgGMU ucwaningo nabafundi non-ohlala. Ikakhulukazi ngabo, kukhona izindawo zokuhlala eziningi, eyenzelwe ingqikithi abantu 1380. Abantu abavela kwamanye amadolobha kungathatha ezindawo ezingaphezu kuka-120, izindawo emahhotela esikhungweni semfundo elinikezwayo ezimweni ezehlukile.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana nendlela ukuhlola ku ehostela kakhulu kucacisa ehhovisi wokwamukela wase-University ngokubiza +7 (8442) 53-23-33. Ungavakashela isikhungo mathupha, isakhiwo zako ezisemqoka sise. Square we Fighters Fallen, 1. Ihhovisi 3-34 kusuka 9 kuya ku-15 amahora Imiphumela wekomidi Ukukhetha.
Lutho neze wonke abafundi uphathe ukubhalisa ifomu isabelomali ukuqeqeshwa, kwenzeka ngoba indawo kwakungenele. Volgograd Medical University inikeza kulabo azange abe amaphuzu anele ukuze udlulisele isabelomali, kwi ukuqeqeshwa isisekelo yentengiso nokubuyisela egcwele izindleko zawo.
Khona-ke konke kuzoya kakhulu ngokuthi yikuphi khono sikhethwe umfundi. Yalutho ukuthola okukhethekile begazi biotechnological, izindleko ukuqeqeshwa enkonzweni yesikhathi esigcwele ruble 38 500 ngonyaka. I ubuchwepheshe eqolo lapho ngonyaka amazinyo, ekhemisi kanye Pediatrics.
wamazinyo Ikusasa kuyodingeka bakhokhe ruble 109.700 ngonyaka yokutadisha, osokhemisi nodokotela bezingane - ruble ayizinkulungwane 102,5. UMnyango ukuxhumana lezihlalo ikhokhwe 10 kuphela, zibekelwe okukhethekile "Management", ngoba Ukumfundisa kulokhu kuyodingeka bakhokhe ama-ruble ayizigidi 50 ngonyaka.
Uma umfundi ufuna impahla zamanje kakhulu ku abanomsebenzi othile, kumelwe sibheke ku "Bulletin of the Volgograd State Medical University." Le nyuvesi has abezindaba ayo, okuyinto ngezikhathi inyathelisa izihloko ngezihloko ezisematheni emkhakheni wezokwelapha, futhi sikhuluma nje kuphela mayelana izikhundla ze-theory, kodwa futhi ezisebenzisekayo.
Inkinga iphephabhuku waziphatha ibhodi elikhulu isihloko, okuyinto yakhiwa odokotela kanye ukhetho wesayensi. Parallel kule, pundits VolgGMU njalo ukusebenza abafundi, sikhuluma ngokubhala izihloko, ukubamba iqhaza izingqungquthela ehlukahlukene yesayensi, exchange of nakho ngokusebenzisana namanye amayunivesithi yezwe.
Abafundi kanye abaphothule VolgGMU asebenze ngempumelelo ukuze kuzuze imithi yasekhaya, abaningi babo izimemo ukusebenza phesheya. Bonke abaye wafunda eyunivesithi, sikhulume ngaye kahle ngokwanele, ngokombono wabo, ngaphakathi esikhungweni semfundo inesiko layo ekhethekile, lapho ungabona abathweswe iziqu zalo. udumo Special, njengoba kusho, bafanelwe nothisha abangebona ochwepheshe weqiniso, njalo ecabangela futhi ezimisele ukusiza abafundi.
Naphezu inqubo okusheshayo nokwehlisa izindawo isabelomali, abafundi iyunivesithi nabafundisi ukholelwa ukuthi lesi izohlunga ukugeleza kulabo abafuna isikole nje ukuthola imfundo ephakeme. Mayelana VolgGMU ngempela ngemfudumalo, futhi izibhedlela, lapho umsebenzi abathweswe iziqu zalo ngemva kokuthweswa iziqu, inyuvesi cabangela lokhu umthombo wezisebenzi, ukufundisa ochwepheshe bezokwelapha.
Volgograd Medical University, ogama kheli :. Square we Fighters Liwile, 1, itholakala a amamitha ambalwa kusukela esiteshini sesitimela ukuya lapho kungekho nobunzima. Ungasebenzisa umugqa ukukhanya wesitimela futhi ufika esiteshini "kuyi-Komsomolskaya", futhi ukusuka lapho ukuhamba a amamitha ambalwa ukuhamba ukuze isakhiwo main of the nyuvesi.
Yini leyenta impendulo Umsebenzi Izikhangibavakashi? nemibandela hlelo, imibhalo edingekayo
Indlela ukubhala testimonial? isifinyezo izincomo
Izinhlangano zezombusazwe - Iyini?
Kanjani ukuba babhale indaba - imithetho izisekelo kanye nezidingo
Ihlangano yokuNgeza Design Nobuchwepheshe Petersburg: incazelo, umnyango, ikhethelo kanye nokubuyekeza
Iziphi izinto okufanele nginikeze ukupheka? College Culinary
Ekupheleni Key - iyithuluzi elibalulekile
Sinjani isimo embonini kawoyela Russian? Namaqiniso kanye Amathemba
Ubungcweti yikuphi? Nobility kanye nesithunzi
I-nitrous oxide - isikhumba enhle ukubukeka iqine.
Ukuzamazama komhlaba - iphupho nencazo: cazelo of phupha!
Pistol "Grach": izici kanye nezinzuzo
Ayelapha imbewu ubisi somkhaya. Ubisi imbewu somkhaya: yokusetshenziswa
Kuzoba kuphi i-Olympic ka-2018? Ama-Olimpiki Asehlobo Nasebusika alandelayo (2018)
Indlela yokwenza i-generator ye-cobblestone "ku-Maynkraft" ngezandla zakho
Iyini isitsha sokugezela ukukhetha?